Sanbaloolshe oo ku eedeeyay Sirdoonadda Caalamiga ah inaysan la wadaagin Xogta iyo Natiijadda Baarista Qaraxyadda ka dhaca Somalia – Hornafrik Media Network
Sanbaloolshe oo ku eedeeyay Sirdoonadda Caalamiga ah inaysan la wadaagin Xogta iyo Natiijadda Baarista Qaraxyadda ka dhaca Somalia
Agaasimaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, C/laahi Sanbaloolshe oo Maqaal dheer ku qoray Wargayska Newyork Times ee ka soo baxa Maraykanka ayaa ku eedeeyay Caalamka inaysan siin Soomaaliya taageeraddii ay u baahnaayeen si ay ula dagaalamaan Argagixisadda.
Sanbaloolshe waxa uu marka hore ka warbixiyay wixii dhacay 14-kii October oo uu ku sheegay inuu ahaa Gaari ay saarnaayeen Walxo Qaraxyo ah oo 2 Tone ah, kuwaasoo ah Miinooyinka la macmilay.
Sanbaloolshe waxa uu ku dhaliilay Beesha Caalamka inaysan taageero ku filan siin Somalia, ” Cambaarayn kama caawinayso Somalia Dagaalka ay kula jirto Alshabaab iyo Qaraxyadda ay sameeyaan, si aan uga adkaano Argagixisadda waxaan u baahanahay Khuburo iyo Qalab oo aanan hadda haysan, iyo waxaan kaloo u baahanahay hab cusub oo iskaashi oo dhex mara Hay’adaha Ammaanka Somalia iyo Saaxibadooda Caalamka, ” ayuu yiri Sanbaloolshe.
Mar uu ka hadlayay Awoodda Alshabaab waxa uu Sanbaloolshe sheegay inay haystaan 8,000 oo Dagaalamayaal ah, kuwaasoo uu sheegay inay xukumaan qaybo badan oo ka mida Dalka. Wuxuu sidoo kale sheegay inay marba marka ka dambaysa ay awood u yeelanayaan inay hormariyaan Qaraxyadda ay adeegsadaan.
Sanbaloolshe waxa uu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in la isticmaalo Macluumaadka ka imaanaya Goobta wax ka dhacaan, sida Qaraxa, waxyaabaha laga sameeyay, SIM Cards, Faraha, iyo DNA, taasoo uu sheegay inay suurtagal ka dhigi karto in la aqoonsado Cidda falka samaysay, si la isaga dhiciyo.
Agaasimuhu waxa uu sheegay in Taageero soo socotay 5 Sanno oo gudaha Dalka lagu diyaarinayay Ciidan tababaran inay hadda leeyihiin 4 Koox oo Boolis ah oo u tababaran Qaraxyadda, balse aan haysan Qalabkii wax lagu baari lahaa, Shaybaarka loo yaqaan Forensic Laboratory, Wuxuuna intaasi ku daray in Kooxahani ay ku shaqeeyaan Hab ay Naftooda qatar ku galinayaan, maadaama aysan haysan Qalabkii lagama maarmaanka u ahaa Baarista Qaraxyadda.
Sanbaloolshe waxa uu ku dooday inay ku shaqeeyaan si Indha La’aan ah, Saaxiibadooda Caalamiga ahna isku koobeen inay Farsamo ahaan na caawiyaan oo kaliya, Wuxuuna ku eedeeyay Sirdoonadda Caalamiga ah in Macluumaadka ay ka aruuriyaan Qaraxyadda marka ay ku wareejiyaan aysan ku soo celin Natiijadda wixii ay ku soo arkeen Baarista, ulana macaalimaan Sirdoonkooda sida Alaab Cayriin ah, halka ay noo arki lahaayeen inaan Macluumaadka wadaagno si aan Dagaalka Argagixisadda ugu guulaysano.
“Waxaan ka codsanayaan Saaxiibadeena inay nala wadaagaan Macluumaadka iyo Cadaymaha ay ka aruuriyaan Goobaha ay Qaraxyaddu ka dhacaan ee Somalia, Aamusnaantu way na dhaga tiraysaa,” ayuu yiri Sanbaloolshe oo Maqaalkiisa u muuqda in NISA aysan wada shaqayn ka helin mudooyinkan Sirdoonadda Caalamiga ah.
Sanbaloolshe waxa uu sheegay in Bishii August uu caawimaad waydiistay FBI-da Maraykanka si ay uga caawiyaan dhinaca Qaraxyadda, si gaar ah waxaan codsaday inaan la kulmo Xaruntooda Daraasaysa Qaraxyadda, balse wax jawaab ah kama helin.
Maqaalka Newyork Times uu ku qoray Sanbaloolshe waxa uu intiisa badan isugu jiray Dhaliil iyo Kaalmo dalbasho, Waana markii ugu horaysay Taariikhda uu Taliye Nabadsugid Baahida Hay’adda uu Madaxda ka yahay ku dalbado Warbaahin.
W. Tarjumay: Xafiiska Wararka HornAfrik.net
Lama Qaadan karo, iyadoo aan la xusayn Xuquuqda Lahaanshaha.
Warbixin : Wadashaqayn la’aan Sirdoon oo Sabab u ah Qaraxyadda Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo booqday dhaawacyada ku jira isbitaal ku yaal Ankara